'Ndiyo Mwaka ... kuBenchmark Kupesana Nemwaka Wemaitiro | Martech Zone
'Ndiwo Mwaka… kuBenchmark Kupesana Nemwaka Wemaitiro
Chishanu, December 22, 2017 Chishanu, December 22, 2017 Douglas Karr
Kune masaiti senge angu, mwaka wezororo unogona kutaridzika zvakanyanya kuora mwoyo ini pandinoongorora analytics. Yakazara traffic iri pasi pamwe neye organic traffic sevateereri vangu vanochinja kuenda kuzororo maitiro uye vanotanga kudzima kuedza kusvika mushure megore Idzva. Iyo zvakare inguva yandinofanira kuzvisimbisa zvese ini nevatengi vangu kuti tiri kuita mushe kunyangwe zvakashata zvatinoona pamwedzi-pamusoro pemwedzi kana kuderera kwemwaka.
Kiyi yekuzvisimbisa iwe kushandisa Google Maitiro sebenchmark yekuongorora traffic yako kuenda. Shamwari dzangu dzakanaka an Indianapolis kudzora zvipembenene kambani. Sezvo kudonha kuchinjira kuchando, chiitiko chechipembenene chinodonha zvakanyanya. Mukati meGoogle Analytics, tinoona nezve 40% yetraffic yatakaona kubva pakakwirira mwaka wezhizha. Kuona zvimiro zvinofamba zvichidzika senge mwedzi-pamusoro-mwedzi zvinogona kuvhiringidza, asi zvakasikwa chaizvo.
Heino tarisiro pane yakazara maitiro ekutsvaga kwekuchengetedza tupukanana muUnited States. Iko kufarira kwakarongedzwa seindekisi yekufarira, saka iwe unogona kuona kuti chikamu chepamusoro chiri muzhizha uye izvozvi chave chingangoita makumi mana nenomwe.
Hausati wapedza. Iwe zvakare unofanirwa kugara uchifunga kuti kune matunhu enharaunda mukati medzenyika ane mwaka wakareba uye mupfupi mwaka, kana kunyangwe pasina mwedzi inotonhora zvachose, saka kana iwe uri bhizinesi remuno iwe uchazoda kuchinjisa ongororo kuenda kuguta reguta. . Isu tasarudza iyo Indianapolis metro dunhu, uye iwe unoona kuti iyo index iri makumi maviri neshanu.
Tichifunga nezve mwaka uno maitiro, tinogona kuenzanisa saiti traffic kupokana nayo. Kana kufarira kuri pa25% yehuwandu hwekufarira kubva muzhizha, tinogona kuenzanisa yedu saiti traffic uye organic traffic inopokana neizvozvo. Uyu mutengi akaderera nezve 35% - kwete 75% kubvira zhizha, saka isu takanyatsogadzikana kuti ivo vachiri kuita pamusoro pevhareji. Yedu organic traffic yakakwira gore-pamusoro-gore asi pasi pasi pe27%. Ini handina tarisiro yakanyanyisa, zvakadaro. Isu takave nemwaka munyoro muMidwest uchienzaniswa nemamwe makore saka isu tinofanirwa kutarisira kudiwa kwekukwira gore-pamusoro-gore.
Wakatarisa here mwaka wekufarira maitiro mune rako bhizinesi uye ukaenzanisa iwo?
Tags: Analyticsgoogle zvimiromaitiro emwakamwaka
Muna 2018, Dhata Ichakuchidzira iyo Inotungamira Insights Ehupfumi
Chigadzirwa Kushambadzira: Iyo Anatomy yeiyo Unboxing Chiitiko